MacOS Monterey Lisitra Beta ho an'ny daholobe farany | Avy amin'ny mac aho
Lisitra beta ho an'ny daholobe macOS Monterey farany
Taorian'ny omaly dia namoaka ho an'ny mpamorona i Apple macOS Monterey beta kinova faha-5 tsy misy afa-tsy ho an'ny mpamorona ihany, androany dia an-tsoratry ny rantsantananay izay beta ampahibemaso farany amin'ity rafitra fiasa vaovao ity. Ho an'ireo rehetra izay nisoratra anarana tamin'ny programa beta tester manana ny fanavaozana azo zahana amin'ny OTA izy ireo. Azonao atao koa ny misintona azy maimaim-poana amin'ny Tranonkala beta beta raha mbola tsy mihazakazaka ny kinova beta ianao.
Omaly, Apple dia namoaka ny kinova 5 an'ny beta ho an'izao tontolo izao, tsy ho an'ny mpamorona macOS Monterey ihany. Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatsika fa nampiditra zava-baovao izy ary rehefa tsy miteny izahay na inona na inona dia tsy hita maso vetivety fotsiny ilay fampiasa ao amin'ny kinova 4. Miresaka ny maody fanaraha-maso iraisana izay izahay koa tsy mahita amin'ity famoahana vaovao ity ho an'ireo mpampiasa voasoratra anarana rehetra.
Ny zavatra hitantsika dia ireo fiasa vaovao an'ny Safari, vaovao sy mampiady hevitra satria efa nanazava taminay tamina fotoana maromaro izahay. Toa mpampiasa maro no tsy tia ny fomba fitantanana kiheba, ankoatry ny zavatra vaovao hafa. Izay toa marimaritra iraisana dia ao ny rindranasa Shortcuts dia tonga amin'ny Mac ihany ary koa amin'ny lahasa FaceTimey SharePlay vaovao amin'ny maody Focus vaovao. Ny fanamarihana manokana dia mendrika ny fampiharana na ny asan'ny Quick Notes sy AirPlay ho an'ny Mac.
Ny tena izy dia ilay iray Mety ho ny 'kinova farany natao ho an'ny daholobe ho an'ny daholobe efa eo am-pelatanantsika izy io. Ity manaraka ity dia saika ny famaranana farany ary efa miditra amin'ny telovolana farany isika. Ampahefatra ho avy izay misy fiasa vaovao maro.
Tadidio fa hoy hatrany isika hoe, Tsy tsara ny mametraka ireo beta ireo amin'ny solosaina lehibe noho izay mety hitranga. Ny betas public dia tena mianatra fa tsy midika akory izany fa mety hisy ny fihemorana hamela antsika ho toy ny milanja taratasy tsara tarehy sy lafo be.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Monterey » Lisitra beta ho an'ny daholobe macOS Monterey farany
Ny mpiasan'ny Cork Apple teo aloha dia nampiakatra ny fandroahana azy taorian'ny nahitana tavela mipoaka tao anaty kitapony
Ny AirPods Pro amin'ny vidin'ny 190 euro dia fanomezana